Ukuqeqeshwa Ngaphandle Kwezemidlalo Ukuhlunga I-Silicone Bottle Water China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Hlunga ibhodlela lamanzi elingabuthi,Ithebula leMidlalo leFilimu leMidlalo,Ukuqeqeshwa kweMidlalo ye-Silicone yamanzi
Home > Imikhiqizo > Amabhodlela Amanzi weSilicone > Hlunga iziphuzo zamanzi ezingabheki > Ukuqeqeshwa Ngaphandle Kwezemidlalo Ukuhlunga I-Silicone Bottle Water
I-Healthy & BPA Free: Yenziwe nge-100% yokudla ebangeni lamakhemikhali angamakhemikhali, i-FDA ivunyelwe futhi ikhululekile ye-BPA, i-PVC, i-lead, i-Phthalate, nezinye izinhlayiya; Iyakwazi ukubhekana nezimo ezihlukahlukene zamazinga okushisa kusuka ku -40 ℃ kuya ku-100 ℃; Ingasetshenziswa kabusha kuze kube nini nanini, isihlungi singahlunga amanzi angu-100L, sithenge isihlungi sendawo lapho isihlungi sifinyelele khona amandla.
Ipulazi lePhethiloli elithengiswayo / eliqinile: I-Kean ibhodlela yamanzi e-Kelicone inikeza umklamo oguquguqukayo kodwa oqinile oqinisekisa ukuthi ungangena emasimini angu-1/3, agijima ukuze afaneleke kalula ekuhambeni kwakho, ephelele yokuhamba okuhambelanayo nemidlalo yangaphandle, ingaxhumeka esikhwameni sakho sokufinyelela okusheshayo. Kulula ukuthwala nokugcina.
Isikhumba sokufaka amanzi esiphuthumayo Isiphuzo samanzi: Ukuklama ngokufaka uphawu lokufakazela inkinobho eyodwa inkinobho yokushintsha inkinobho ikuvumela ukuvula ibhodlela ngomshini olula womunwe, ukuvimbela amanzi ukuvuza ngenxa yokucindezela noma ukuzamazama noma ukuphi lapho uya khona. Ibhodlela lemanzi elikhulu lamandla elingu 750 ml, elihle lokuzilibazisa ngaphandle, ukuhamba, ezemidlalo, ikamu, ukuhamba ngezinyawo, ukusinda noma ukusebenzisa nsuku zonke.
Okutholako: 1 Ibhodlela lamanzi elingenakwenzeka, i-fiber engapheli engu-1 FF membrane, 1 I-Coconut esebenziwe nge-carbon & Antibacterial Beads,
Ulapha: >> Hlunga amabhodlela amanzi amanzi angaphandle >> Ukuqeqesha ngaphandle kwezemidlalo Ukuhlunga i-Silicone Bottle Water
Ukuqeqeshwa Ngaphandle Kwezemidlalo Ukuhlunga I-Silicone Bottle Yamanzi yimikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. I- Outdoor Training Sport Filter Isinkwa samanzi asinamathisela amanzi ikakhulukazi ekusebenzeni kwethu kwekhaya. Okuqukethwe kwe- Outdoor Training Sport Filter Silicone Water Bottle kuyinto eyi-100% ye-BPA yebanga lobuchwepheshe bebanga lobuchwepheshe kanye ne-PP. I- Outdoor Training Sport Filter I-Silicone Water Bottle ye-yethu ayiyona into enobuthi, futhi ivunyiwe yi-FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby mitething mitten , njll. Okokugcina, Siyi-factory, ngakho-ke singakunika izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephezulu kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
Ithebula leMidlalo leFilimu leMidlalo
Ukuqeqeshwa kweMidlalo ye-Silicone yamanzi
Hlunga ibhodlela lamanzi elingabuthi Ithebula leMidlalo leFilimu leMidlalo Ukuqeqeshwa kweMidlalo ye-Silicone yamanzi Hlunga ibhodlela lemanzi Hlunga iziphuzo zamanzi ezingabheki Ibhodlela lamanzi eliqinile Hlunga ibhodlela le-silicon yamanzi Ibhodlela leManzi elihlunga